News - Ihe ise mere iji Jiri Laser Cutting Machine
Laser ịchabụ ụdị na-enweghị kọntaktị, dabere na usoro nrụpụta nke na-agwakọta okpomọkụ na-elekwasị anya na ike ọkụ, ma na-etinye nrụgide ka ọ gbazee ma fesa ihe na warara ụzọ ma ọ bụ mbepụ. Tụnyere ọdịnala ọnwụ ụzọ, laser ọnwụ nwere ọtụtụ uru. Ike a lekwasịrị anya nke laser na CNC na-enye ike nwere ike ịkpụcha ihe dị iche iche na ọdịdị dị mgbagwoju anya. Laser ọnwụ nwere ike nweta elu-nkenke na obere ndidi ndidi n'ichepụta, belata ihe mkpofu, na hazie ihe dị iche iche. The nkenke laser ọnwụ usoro nwere ike ọtụtụ-eji na a dịgasị iche iche nke n'ichepụta ngwa, na ọ na-a bara uru akpan owo ke akpakanamde ụlọ ọrụ, na-amị mgbagwoju na oké akụkụ na a dịgasị iche iche nke ihe, si hydroformed 3D shapes na airbags. The nkenke ngwá electronic ụlọ ọrụ na-eji rụchaa machining metal ma ọ bụ plastic akụkụ, housings, na sekit mbadamba. Site na nhazi nhazi gaa na obere ụlọ ọrụ na nnukwu ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ha na-enye ndị nrụpụta ọtụtụ uru. Ndị a bụ ihe ise mere nkenke laser ọnwụ na-eji.
Ezigbo ziri ezi
Izi ezi na ọnụ ọgụgụ nke ihe ndị laser belata dị mma karịa ndị nke usoro ọdịnala na-egbutu. Mbelata laser na-eji ụdọ a na-elekwasị anya nke ukwuu, nke na-arụ ọrụ dị ka mpaghara emetụtara ọkụ n'oge usoro ịcha, ma ọ gaghị ebute oke mmebi ahụ ọkụ n'akụkụ akụkụ. Tụkwasị na nke ahụ, a na-eji usoro ịkụcha gas dị elu (na-abụkarị CO2) ịgba ihe ndị a wụrụ awụ iji wepụ ihe ndị na-egbutu ihe nke ihe ndị dị warara, nhazi dị ọcha, na nsọtụ nke ụdị mgbagwoju anya na atụmatụ dị nro. Igwe ọnwụ laser nwere ọrụ ọnụọgụ kọmputa (CNC), yana usoro mkpofu laser nwere ike na-achịkwa ya na-akpaghị aka site na mmemme igwe eji eme tupu. Igwe ọnwụ laser a na-achịkwa CNC na-ebelata ihe ize ndụ nke njehie ndị ọrụ ma na-emepụta akụkụ ndị ziri ezi, nke ziri ezi ma sie ike karị.
Meziwanye nchekwa ebe ọrụ
Ihe omume ndị metụtara ndị ọrụ na akụrụngwa n'ebe ọrụ nwere mmetụta na-adịghị mma na nrụpụta ọrụ ụlọ ọrụ yana ụgwọ ọrụ ya. Nhazi ihe na njikwa, gụnyere ịcha, bụ ebe ihe mberede na-emekarị. Iji lasers bee maka ngwa ndị a na-ebelata ihe ize ndụ nke ihe ọghọm. N'ihi na ọ bụ usoro na-enweghị ịkpọtụrụ, nke a pụtara na igwe anaghị emetụ ihe ahụ aka. Tụkwasị na nke ahụ, ọgbọ nke ọkụ anaghị achọ ka onye ọ bụla na-arụ ọrụ n'oge usoro ịkụcha laser, nke mere na a na-echekwa ọkụ dị elu n'ime igwe akara. N'ozuzu, ewezuga nyocha na mmezi arụmọrụ, ịchacha laser anaghị achọ ntinye aka. E jiri ya tụnyere usoro ịkpụchasị ọdịnala, usoro a na-ebelata ịkpọtụrụ ihu na ebe a na-arụ ọrụ, si otú a na-ebelata ihe ọghọm nke ndị ọrụ na mmerụ ahụ.
Nnukwu ihe eji eme ihe
Na mgbakwunye na ịkpụ oke geometries nwere oke nkenke, igbutu laser na-enyekwa ndị nrụpụta ohere ịkpụ na-enweghị mgbanwe ntụgharị, na-eji ihe ndị ọzọ na oke obosara. Iji otu osisi ahụ na ọkwa dị iche iche dị iche iche, ike na ogologo oge, ịchacha laser nwere ike belata ọtụtụ ọla, yana mgbanwe ndị yiri ya na igwe nwere ike belata ihe nke oke dị iche iche. Ngwakọta CNC agwakọtara ọnụ nwere ike iji aka ya rụọ ọrụ nke ọma.
Oge izizi ọsọ ọsọ
Oge ọ na-ewe iji melite ma rụọ ọrụ akụrụngwa ga-eme ka ọnụ ahịa mmepụta nke ọrụ ọ bụla dị elu, yana iji usoro ịcha laser nwere ike belata oge nnyefe na mkpokọta mmepụta. Maka ịchacha laser, ọ dịghị mkpa ịgbanwe ma tọọ ebu n'etiti ihe ma ọ bụ oke ihe. Tụnyere ọdịnala ọnwụ ụzọ, laser ọnwụ Mbido oge ga-ukwuu belata, ọ na-agụnye ihe igwe mmemme karịa loading ihe. Ke adianade do, otu ọnwụ na laser nwere ike ịbụ 30 ugboro ngwa ngwa karịa omenala sawing.
Site na iji ụzọ ịcha laser, ndị nrụpụta nwere ike ibelata mkpofu ihe. Ilekwasị anya na osisi nke eji na laser ọnwụ usoro ga-emepụta a narrower ịkpụ, si otú mbenata size nke okpomọkụ-emetụta mpaghara na mbenata thermal mmebi na unusable ihe ibu. Mgbe a na-eji ihe ndị na-agbanwe agbanwe, nrụrụ kpatara site na igwe igwe na-emekwa ka ọnụọgụ nke ihe ndị na-adịghị mma. Nondị na-enweghị kọntaktị nke ịcha laser na-ewepụ nsogbu a. Usoro ọnwụ laser nwere ike belata oke nkenke, nkwụsịtụ siri ike, ma belata mmebi ihe na mpaghara emetụta ọkụ. Na-enye ohere ka etinyere akụkụ ahụ tinyekwuo anya na ngwongwo ahụ, yana imepụta ihe siri ike na-ebelata mkpofu ihe ma na-ebelata ihe onwunwe na oge.